Phicotha ukuNikezelwa kweSemina yokuLungisa iMfundo yoMculo ye-COVID kunye noDante ngexesha le-NAMM 2021 | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » I-Semina yokuPhicotha ukuPhicotha ukuLungelelanisa iMfundo yoMculo ye-COVID kunye noDante ngexesha le-NAMM 2021
Uqeqesho kwi-Dante AV kunye ne-Dante Certification Levels 1 kunye ne-2 nayo iyafumaneka
Uphicotho-zincwadi lubonelela ngesemina yasimahla ngexesha le-NAMM 2021 ngesihloko esithi "Ukubuyela kwiMfundo yoMculo nakwiMidlalo yeQonga ePhambili." Isemina iphonononga indlela iDante evumela ngayo iintlobo ezahlukeneyo zomdlalo ophilayo ngelixa kugcinwa ukudideka kwezentlalo kunye nokuhlala kwigumbi lokhuseleko kubo bonke.
Kukwakhona isishwankathelo esitsha sesisombululo esiguqukayo se-Dante AV sevidiyo-ngaphezulu-kwe-IP esivela kuVavanyo, kunye neNqanaba 1 kunye no-2 kwikhosi edumileyo yesiQinisekiso seDante. Oko kuthetha ukuba ungakuphi emhlabeni, kwaye nokuba uyazi njani uDante, unokufumana uqeqesho oluxabisekileyo kunye nokuqonda okusebenzayo ekusebenziseni iDante kwilizwe lokwenyani, ukudityaniswa kwe-AV-over-IP.
Iisemina kunye neeseshoni zoqeqesho ziya kusebenza ngoJanuwari 18, nangona kunjalo, ividiyo iya kubakho ngokufunwayo ngoFebruwari. Ubhaliso lweziganeko luyafumaneka ngoku www.audinate.com/NAMM21
Ukubuyela kwiMfundo yoMculo ngoku
Ukuba ukhe wazama ukusebenzisa ii-Zoom iintlanganiso zebhendi okanye yomnyhadala womnyhadala, uyazi ukulibaziseka (ukubambezeleka) kwenkqubo kuphezulu kakhulu ekusebenzisaneni nomculo. Uya kuba nakho ukwenza omnye komnye, kodwa aninakudlala kunye. Nangona kunjalo, iinethiwekhi ze-Dante ezisezantsi ziyeyona nto iphambili kwimveliso ephilayo kwiminyaka elishumi kwaye inokusombulula ingxaki ngoku.
Sijoyine kwingxoxo yamabali akhuthazayo ootitshala bomculo kwisikolo samabanga aphakamileyo nakwinqanaba leyunivesithi usebenzisa iDante ukudibanisa abadlali abavela kwiindawo ezahlukeneyo. Lawa ngamabali onokuwaphindaphinda kwinkqubo yakho, namhlanje. Ingcebiso malunga nokucwangciswa kwendawo, ukudibanisa iindawo ezininzi ukulungiselela ii-ensembles ezipheleleyo ezingasenakulunga kwigumbi elinye, kwaye kwaneendlela zokwenza imali kwinethiwekhi yakho yekhampasi ziya kuxoxwa.
Okokugqibela, siza kubonisa ukuba inethiwekhi eyakhiweyo yeDante iya kuqhubeka njani ukukhonza kwihlabathi lasemva kobhubhane kwaye ibe sisixhobo esidala amathuba amatsha emfundo.
Ukwazisa iDante AV-Ividiyo yeSisombululo seDante
UDante sisisombululo sokunxibelelana ngokulalelwayo esiqhuba umhlaba weaudio, kwaye ngoku uDante AV uzisa ividiyo eqongeni. Sijoyine kwiseshoni yoqeqesho kwizibonelelo zokudibanisa iaudiyo zeVidiyo kunye nevidiyo kunye, kwaye ubone umboniso kwesi sisombululo sitsha simangalisayo!
Amanqanaba oQeqesho lukaDante
Isiqinisekiso seDante iNqanaba 1: UDante sisisombululo esikhokelayo senethiwekhi ye-AV kunye nomgangatho we-de facto kwisandi sobugcisa namhlanje. Eli klasi libonelela ngesiseko kwiingoma ezirekhodiweyo, zevidiyo kunye nezothungelwano- kwaye inokuba yiyo yonke into efunekayo ukudibana kunye nokusebenza kwenkqubo encinci yeDante kutshintsho olunye, oluzinikeleyo. Emva kwale seshoni, abo bezimeleyo kufuneka babe nezakhono ezaneleyo zokugqiba uvavanyo lweDante Level 1.
Isiqinisekiso seDante iNqanaba 2: Eli klasi liyaqhubeka ukusuka kwizigama ezisisiseko ezivela kwiNqanaba lesiQinisekiso seDante 1, uHlelo luka-2021. Abazimaseyo baya kufunda izakhono zokwakha kunye nokusebenzisa iinethiwekhi zeDante eziphakathi ukuya kwezinkulu kutshintsho oluninzi, kunye neenethiwekhi ezingafunekiyo kunye nokwabelana nge-bandwidth kunye nezinye iinkonzo. Emva kwale seshoni, abo bezimeleyo kufuneka babe nezakhono ngokwaneleyo ukugqiba uvavanyo lweDante Level 2.
Ngolwazi oluthe kratya kuPhicotho-zincwadi, ndwendwela www.audinate.com
Malunga ne-Audinate Group Limited:
I-Audinate Group Ltd (ASX: AD8) inombono wokuba nguvulindlela wekamva le-AV. Ukuphicothwa kwamabhaso okuphumelela i-Dante AV kwisisombululo senethiwekhi se-IP yinkokeli yehlabathi kwaye isetyenziswa kakhulu kwisandi esiphilayo sobungcali, ukufakelwa kwezorhwebo, usasazo, idilesi yoluntu kunye nemizi-mveliso yokurekhoda. UDante ungene endaweni yeentambo ze-analogue zemveli ngokudlulisela imiqondiso yevidiyo kunye nevidiyo kwimigama emide, kwiindawo ezininzi ngaxeshanye, engasebenzisi nto ngaphandle kwentambo ye-Ethernet. Uphicotho-zincwadi ukwikomkhulu lakhe e-Australia kwaye uneeofisi zommandla e-United States, United Kingdom nase-Hong Kong. Itekhnoloji ye-Dante inika amandla iimveliso ezifumaneka kumakhulu abavelisi be-AV kwihlabathi liphela. Izabelo eziqhelekileyo zenkampani zithengiswa kwi-Australian Securities Exchange (ASX) phantsi kwekhowudi ye-ticker AD8.
UDante noPhicotho ziimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo zeAudinate Group Ltd.
Previous: IStreamland Media ibhengeza injongo yokufumana ishishini leposi leTechnicolor kwiTechnicolor
next: IMTJIBS IFUMANA IIPOTI NGAPHAMBI KOKWENZEKA NE-AGITO